घर यूरोपियन फुटबल स्टोरीहरू फ्रेन्च फुटबल खेलाडीहरू Odsonne Edouard बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
अन्तिम अपडेट गरिएको जुन 15, 2020
हाम्रो ओड्स्न एडुअर्ड बायोग्राफीले उनको बचपन कहानी, प्रारम्भिक जीवन, अभिभावक, परिवार तथ्य, प्रेमिका, व्यक्तिगत जीवन र जीवनशैली तथ्यहरूको पूर्ण कभरेज प्रदान गर्दछ। यो उनको जीवन कहानी को एक पूर्ण विश्लेषण छ, सही आफ्नो शुरुआती दिन देखि जब उहाँ प्रसिद्ध बने।
ओडसन एडुअर्ड जीवनी- उनको प्रारम्भिक जीवन र महान उदय हेर्नुहोस्। ।: हेराल्ड, ट्रान्सफरमार्केट र ट्विटर।
हो, तपाइँ र मलाई थाहा छ कि उहाँ सेन्टिकका एक उत्कृष्ट स्ट्राइकर हुनुहुन्छ १ –– .-२००1997 बीचमा हेनरिक लार्सनको शासनकालदेखि। यद्यपि, हामीले महसुस गरेका थोरै फुटबल फ्यानहरूले ओड्सने एडुअर्डको जीवनी पढ्ने बारेमा सोचेका छन जुन धेरै रोचक छ। अब थप विज्ञापन बिना, सुरु गरौं।
ओड्सन्ने एडुअर्ड बाल्यकाल कहानी:
शुरुवातकर्ताहरूको लागि, उहाँसँग उपनामहरू छन् - "द रकेट" र "जादू ओडसन"। यस फुटबलरको जन्म १ 1998 16 before फिफा वर्ल्ड कप भन्दा months महिना अघि भएको थियो - जनवरी १ French, १ 1998 XNUMX French मा फ्रेन्च गुयानाको कउरो शहरमा।
यदि तपाईंलाई ओड्सने एडुअर्डका अभिभावकहरू कहाँ छन् भनेर थाहा थिएन भने, Kouou फ्रान्सेली गुयाना को एक अटलांटिक तट मा एक जिल्ला हो, दक्षिण फ्रान्स को एक विदेशी विदेशी विभाग। गुगलका अनुसार देश फ्रान्सबाट from,०7,086 किलोमिटर टाढा छ।
यो Kouou- शहर हो जहाँ ओड्सन्ने एडुअर्डका अभिभावकले उनलाई राखेका थिए। यो फ्रान्सबाट ,,०7,086 km किलोमिटर टाढा छ। ।: गुगल नक्शा
एडुअर्डले आफ्नो एक अन्तर्वार्तामा भने कि उनी एक आरक्षित बच्चाको रूपमा हुर्किए, जसले मुस्कुराउँन वा कानबाट कानमा हाँस्न मन पराउँथे। उसको वयस्कतामा पनि, हड्तालका लागि केही परिवर्तन भएको छैन। साथै, त्यो अन्तर्वार्तामा, उनले एक पटक कबूल गरे कि एउटा बच्चाको रूपमा, उनी एक स्वर्गदूत थिएनन्। निहितार्थको मतलब यो हो कि उसले केही मूर्ख कामहरू गर्यो - तपाईको परिवारको छविलाई दिक्क पार्न कुनै डरलाग्दो केही छैन।
आफ्नो बाल्यकालको शुरुमा, टिभीमा फुटबल देख्नु र स्टेडियममा जान सधैं नै उसको कुरा भएको थियो। यस खेलको लागि असीमित प्रेमले उसलाई फुटबल कट्टरपन्थी बनायो, पछि यस्तो घटना जसले उसलाई उसको भाग्यसँग मिति दिईरहेको देख्यो।
ओड्सन्ने एडुअर्ड परिवार मूल:
तपाईंले अवलोकन गर्नुभएकै होला, फ्रान्सेली स्ट्राइकर एकै फ्रान्सले उपनिवेशमा राखेका ती ओभरसी टेरिटोरी मध्येका हुन्। त्यसो भन्दै, अर्को, तपाईले सोच्न सक्नुहुन्छ कि उसको आमा र बुबा को परिवार उनीहरुको परिवार फ्रेन्च गुयानाबाट छ। सत्य हो, तपाईं यसको बारे मा गलत।
के तपाईंलाई थाहा छ?… ओड्स्न एडुअर्डका आमा बुबा बाबु फ्रेन्च गुयानाका होइनन् उनीहरूको छोराले त्यहाँ जन्मेका बाबु हुन्। उसको आमा र बुबा दुबै हाइटियन हुन् जसले समृद्धिका कारणले १ 1980 s० को दशकमा फ्रान्सेली गुयानामा हरिया घाँसहरूको लागि देश छोडे। ओड्सन्नेको जन्म भएको केही बर्ष पछि, र कुनै समयमा तिनीहरू फ्रान्समा बसाइँ सरे।
ओड्स्न एडुअर्ड परिवार पृष्ठभूमि:
धेरै आप्रवासीहरूका लागि पेरिस उपनगरहरू मध्यम-वर्गको घरपरिवारको लागि उत्तम गन्तव्य हो। मेट्रोपोलिटन फ्रान्समा बसाई सरेपछि ओड्स्ने एडुअर्डका आमाबुबा पेरिसको उत्तरपूर्वी उपनगरमा अवस्थित बोबिनीमा बसोबास गरे। त्यहाँ, तिनीहरूले आफ्नो छोरा, निश्चित फुटबलर हुर्काए।
ओड्सन्ने एडुअर्ड प्रारम्भिक वर्ष- शिक्षा:
ती केटाका बुबाआमा आमा र बुबाको श्रेणीमा छन् जसले आफ्ना बच्चाहरूलाई फुटबल खेल्न अनुमति दिएका थिए तर यसलाई शिक्षामा सम्झौता गर्न प्रयोग नगर्न जोड दिए। सारांशमा, स्कूल बुबा र आमा दुबैका लागि महत्वपूर्ण थियो तर ओड्सन्नेका लागि होइनन् जसले एक पटक अन्तर्वार्तामा भनेका थिए ओन्जेमोन्डियल;
स्कूल मेरा अभिभावकको लागि महत्त्वपूर्ण थियो। यसैले म मात्र खुशी थिएँ तिनीहरूलाई खुशी पार्न मलाई। मैले यो मन पराएको कारणले होईन। शिक्षकहरूको नजरमा, म रमाइलो पछि थिएँ। तपाईं, म राम्रो अंक बनाउन को लागी।
सहयोगी अभिभावकहरू शिक्षाप्रति उनीहरूको प्रेमको बाबजुद पनि पछि ओड्सन्नेलाई स्थानीय क्लब एफ ए बोबिग्निसँग फुटबल क्यारियर बनाउने प्रयासमा प्रशस्त थिए। छ वर्षको उमेरमा, त्यो जवान क्लब मा भर्ना भयो जहाँ उसले आफ्नो शिक्षाको प्रकार शुरू गर्‍यो।
ओड्सन्ने एडुअर्ड बायोग्राफी- अर्ली क्यारियर लाइफ:
समय बित्दै जाँदा, एक पेशेवर फुटबलर बन्ने सम्भावनाहरू स्कूल जाने भन्दा बढी प्रबल भयो। युवा ओडसनले आफ्नो माध्यमिक शिक्षामा कम ध्यान दिए जबकि उनको क्यारियर अनुसरण गर्न बढी समय समर्पण गरे। दृढ निश्चय सफलताको लागि नेतृत्व भयो, र एएफ बोबिग्नीमा भाग लिएको तीन वर्ष पछि, उक्त जवानले गोल स्कोर गर्न र ट्राफी संकलन गर्न सुरु गरिसकेका थिए।
फ्रान्सेली मानिस ट्राफीको साथ बचपनदेखि नै अपरिचित छ। अवलोकन गरिए अनुसार उनले एक टूर्नामेन्टका लागि गोल स्कोररको पुरस्कार जितेका थिए जबकि एएफ बोबिग्नी। ।: ट्विटर
यस्तो कोमल उमेरमा गोल-स्कोरिंग मेशिन बन्नु भनेको एक चीज हो। यो तथ्य हो कि फ्रान्सको एक ठूलो क्लबले उनलाई देख्यो र कुनै समयमा, आफ्नो हस्ताक्षरको लागि उनको सानो क्लब, एएफ बोबिग्नीलाई आक्रमण गर्‍यो।
ओड्सन्ने एडुअर्ड बायोग्राफी- फेम कथाको लागि रोड:
धेरै प्रशंसकहरूलाई अज्ञात, PSG कतारी टेकओभर शीर्ष प्रतिभाहरू खरीद गर्ने बारेमा थिएन Blaise Matuidi र Marquinhos आदि यो युवा प्रतिष्ठानमा लगानी गर्ने बारेमा पनि थियो। त्यो वर्ष २०११, ओड्सन्नेले अत्यन्त असामान्य तरिकामा PSG स्काउटको ध्यानाकर्षण गर्‍यो। अब हामी तपाइँको जीवनीको त्यो अंश तपाइँलाई बताउँछौं।
कसरी ओडसन पीएसजी खेलाडी बन्न:
अनुसार डेली रेकॉर्ड, पेरिस सेन्ट-जर्मेनको प्रमुख स्काउट एक युवा फिक्स् हेर्ने योजना त्याग्न बाध्य भएको थियो जुन पछि खराब मौसमका कारण रद्द गरियो। यसको सट्टामा, उनी एएफ बोबिनी हेर्न यात्रा गरे जहाँ एडुअर्ड खेलिरहेको थियो। संग एक साक्षात्कार मा एथलेटिक, रेनाउडले भने कि उनी तुरुन्तै जवानको सम्भाव्यताबाट प्रभावित भएका थिए, एउटा यस्तो उपलब्धि जसले उनलाई क्लबमा छापा मार्न प्रेरित गर्‍यो, जसमा ओड्सन एडुअर्डका आमाबुवालाई उनको हस्ताक्षर स्वीकृत गर्नु समावेश छ।
? सुरुमा, म PSG मा सामेल हुन धेरै उत्साहित थिए। फ्रान्सका सबै भन्दा राम्रो खेलाडीहरू जस्तो समान छत बाँड्न लागेको कुरा थाहा पाउँदा म खुशी भएँ।
मलाई याद छ, मैले आफ्नो परिवार छोडेको एक दिन अघि। म रातभर सुतिरहेको छैन किनकि म जानको लागि हतारमा थिए (मुस्कान)।
युवाले PSG मा भाग लिने खातामा भने। ओड्स्न एडुअर्डका परिवारका सदस्यहरूसँग उहाँसँग हिड्ने कठिन समय थियो। हतारमा भए पनि, आफ्ना बाबुआमा र प्रियजनहरूलाई छोड्नु गाह्रो थियो। धन्यबाद, उनीहरूको एक्लोपना सीमित गर्न ओड्स्नका बुबाले PSG मा आफ्नो छोरा, साप्ताहिक पारिवारिक भेटहरू प्रदान गर्न आग्रह गरे।
सफल हुने मोडमा मोड- UEFA यूरोपियन महिमा:
युवा एकेडेमी स्नातक तर्फ आफ्नो अन्तिम वर्ष मा, Odsonne फ्रान्सेली U17 राष्ट्रिय टीम कोच द्वारा बोलाए। PSG को साथ आफ्नो गोल स्कोरिंग प्रतिभाका लागि धन्यवाद, जवान २०१ the UEFA यूरोपीयन अण्डर १ Champion च्याम्पियनशिपमा भाग लिनको लागि चयन गरिएको थियो।
के तपाईंलाई थाहा थियो? ... Magic Odsonne साथ डेट अपमाकोानो र Zinedine Zidane को फ्रान्सलाई ठूलो ट्रफी उचाल्न सहयोग गर्ने छोरा लुका पनि साथ थिए। ट्रफी प्राप्त गर्नु पर्याप्त थिएन, वास्तवमा युवा गोल मेसिनले टूर्नामेन्ट अवार्डका शीर्ष स्कोररलाई 8 गोलका साथ समात्यो।
ओड्सन्ने एडुअर्ड जीवनी- फेम टु फेम स्टोरी:
टुक्रिने भन्दा, युवा स्ट्राइकर आफ्नो गोल स्कोरिंग पराक्रम संग शक्ति देखि एक ताकत मा बढ्दै गयो। PSG २०१–-१– सत्रमा, जादूगरले २ 2015 खेलमा a२ गोल गरे जुन उनलाई Titi d'Or ले पुर्‍यायो। यो एक उत्कृष्ट युवा एकेडेमी खेलाडी को लागी एक पुरस्कार हो, र यो पहिले जितेको थियो किंग्स्ली कोमैन। फेरि, फ्रान्सेली-गुयाना स्टार टीम का हिस्सा थिए जसले PSG लाई अल कास कप जित्यो।
हेर, रकेटको उपलब्धि फेरि एक युवा खेलाडीको रूपमा। ऊसँग फुटबलमा सबैभन्दा राम्रो युवा क्यारियर थियो। ।: इन्स्टाग्राम
पेरिस सेन्ट-जर्मेनको वरिष्ठ पक्षसँग एक पेशेवर सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि ओड्सने धेरै युवा स्नातकहरू जस्तै - मनपर्दो Yacine Adli- पहिलो टीम टोली शर्ट को संभावना को अन्वेषण गर्न शुरू भयो। आउटक्लास गर्न असमर्थता एडिंसन काभनी loanण सार्न को लागी नेतृत्व।
टुलूजको साथ एक अप्रिय loanण जादूको पछि, ओड्सनेले विदेशमा विचार गर्न थाले। सेल्टिकमा अर्को loanण कदम सार्थक भयो। हुप्समा, जादुई ओडसनले आफ्नो फिर्ता पायो गोल मोजो। स्ट्राइकरले क्लबका लागि goals 37 गोलले उनीहरूको ऐतिहासिक "ट्रबल" सील गर्न मद्दत गर्‍यो।
ब्रान्डन रोडर्स अन्तर्गत सेल्टिकले २०१-2018-२०१ D घरेलु ट्रेबल जित्न सहयोग गर्नेहरूमा मेजिक ओडसन पनि थिए। ।: IG
ओडसन एडुअर्ड बायोग्राफी लेख्दा, फुटबल प्रशंसकहरूले उहाँलाई एक मध्येको रूपमा देख्दछन् युरोपका best० सर्वश्रेष्ठ युवाहरू। जस्तै मौसा डेम्बाली, रकेट फ्रान्स फुटबल को भविष्य बन्ने संभावना छ। बाँकी, तिनीहरू भन्छन् (तल हाइलाइट सहित), अब इतिहास हो।
Odsonne Edouard सम्बन्ध Life- प्रेमिका, पत्नी?
उसको युवा अवस्था र वरिष्ठ क्यारियरमा अहिलेसम्मका सबै गोलले हामी फ्रान्सेली स्ट्राइकरलाई महिला प्रशंसकहरू नहुनु असम्भव थाहा छ।
एकातिर, सुपर धनी हुनु, लम्बाइ र ह्यान्डसम सम्भावित प्रेमिका र आफुलाई पत्नी सामग्री सम्झनेहरूलाई आकर्षित गर्न पर्याप्त भन्दा बढी छ। त्यसो भए अन्तिम प्रश्न हो;
ओड्सन्ने एडुअर्डको प्रेमिका को हो? ... ऊ विवाहित हो? ... के ऊसँग श्रीमती छ?
धेरै फुटबल फ्यानहरूले सोधेका छन्- ओड्सन्ने एडुअर्डको प्रेमिका को हो? ... ऊ विवाहित हो? ... के ऊसँग श्रीमती छ? ।: Picuki
ओडसन एडुअर्डको सम्बन्ध स्थितिको फोटोबाट हेरेर तपाईले आफ्नो हालको फोकस महसुस गर्नुहुनेछ जुन फुटबल हो। यो हुन सक्छ कि फ्रान्सेली स्ट्राइकरले हामीले उनको जीवनी सृजना गरिरहेको बेला, केटीको प्रेमिका हुन सक्छ तर उनको सम्बन्ध सार्वजनिक गर्न इन्कार गरेको हुन सक्छ - सायद उसको क्यारियरको यो चरम चरणमा होइन।
हामीलाई कसरी थाहा भयो? ... किनभने किनकि उनले एक पटक स्वीकार गरे कि उनले प्रलोभनको प्रतिरोध गर्न कडा संघर्ष गरिरहेछन्।
ओडसन एडुअर्ड व्यक्तिगत जीवन:
पिचबाट उसको चरित्र चिन्नेले तपाईंलाई उसको व्यक्तिको स्पष्ट तस्वीर प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ। सुरूवात गरेर, म्याजिक ओडसन एक त्यस्तो व्यक्ति हो जसलाई कम प्रोफाइलसँग धेरै सहज महसुस हुन्छ उसले पिचको बाहिर राख्छ। उसको सबै गोलहरूको बाबजुद पनि, व्यक्तिले उसलाई फुटबलको बाहिर सायद कहिलै सुन्न सक्दैनन्। किनभने किनभने एक अन्तर्वार्तामा प्रकट गरिएको स्ट्राइकर एक विवादास्पद व्यक्ति हो। उसको शब्दमा;
पिच बन्द, फुटबल प्रशंसकले मलाई थोरै सुन्नेछ किनभने म एक बुद्धिमान् व्यक्ति हुँ। म विशेष गरी बाहिर फुटबल देखाउँदा कदर गर्दिन। यसको सट्टामा, म केवल जमीनमा आफूलाई अभिव्यक्त गर्न चाहन्छु।
ओड्सन्ने एडुअर्ड व्यक्तिगत जीवन। यहाँ, उनी आरामको साथ आफ्नो बैठक कोठाको आर्म चेयरमा बस्छन्, उनको व्यक्तित्वको बारेमा अन्तर्वार्ताको लागि। क्रेडिट: ओन्जेमोन्डियल। ।: ओन्जेमोन्डियल।
होल्ड गर्नुहोस्; उसको अर्को राम्रो गुण पनि छ। स्ट्राइकर एक त्यस्तो मानिस हो जो रिसाउनमा चाँडो हुँदैन। रकेटले उनका आलोचकहरू सुन्न सक्दछ, जसले पनि उहाँलाई नकारात्मक रूपमा न्याय गर्दछ। उसको लागी एक नकारात्मक आलोचना उसको धारणामा सकारात्मक छ। यसले उसलाई एक व्यक्तिको रूपमा अगाडि बढ्न र सुधार गर्न मद्दत गर्दछ।
ओड्सन्ने एडुअर्ड जीवनशैली:
अगाडि, कुनै पक्कै पनि, आफ्नो वर्तमान his5मिलियन नेट वर्थ, € 40K साप्ताहिक ज्याला र2मिलियन annual वार्षिक वेतन मान। सत्य यो हो कि ओड्सन्ने एडुअर्डलाई कम कुञ्जी जीवनशैलीमा धेरै समस्या हुँदैन।
उसको घरलाई आरामदायी बनाउन पैसा खर्च गर्नु उहाँको लागि पर्याप्त छ। अन्तमा, फुटबलर विलासिता देखाउने विचारमा विश्वास गर्दैन, जस्तै पॉश कारहरू र ठूला घरहरू (हवेली) आदि।
ओडसन एडुअर्ड लाइफस्टाइल- खुशी हड्ताल वाला, पोश कारहरूमा लगानी गर्नु भन्दा उसको साधारण घरमा सहजै बस्न रुचाउँछन्। ।: इन्स्टाग्राम
ओड्सन्ने एडुअर्ड पारिवारिक जीवन:
धेरै फुटबलरहरूका लागि स्टारडम जाने बाटो सजिलो हुने थिएन किनकि यो परिवारका सदस्यहरूको मद्दत बिना नै छ। यस सेक्सनमा, हामी तपाईंलाई ओड्स्न एडुअर्डका आमाबुवा र परिवारका अन्य सदस्य - उनको बहिनीका बारेमा बढी बताउनेछौं।
ओड्सन्ने एडुअर्डको बुबाको बारेमा:
पहिलो, हामी हाईटियन बुबालाई आफ्नो लक्ष्य, सपना र आकांक्षाहरूको श्रेय दिन्छौं, उनी आफैंको लागि मात्र होइन, उनको छोराको लागि। उदाहरणका लागि, उनले मार्ग प्रशस्त गरे र ओड्सन्नेलाई फुटबलर बन्ने सपनाहरू बाँच्न दिए जुन उनीहरूको लागि राम्रो काम गरेनन्। आउनुहोस्, यो पनि नबिर्सनुहोस् कि कसरी सुपर बुबाले PSG को लागी साप्ताहिक भ्रमण गर्न अनुमति दिनुहुन्छ ताकि युवा एडवर्ड परिवारको नजीक हुनेछ।
ओड्सन्ने एडुअर्डको आमाको बारेमा:
फुटबलरहरूको अन्तर्वार्ता पढेर Onze दुनिया भर कोहामी विश्वास गर्छौं कि उसको आमा परिवारमा खाना पकाउने मूल हो; छोरीको लागि एउटा उपलब्धी बित्नुभयो। उनको परिवारबाट पाएको समर्थनलाई धन्यवाद, ओड्सनेले अब फ्रान्सेली र इटालियन गेस्ट्रोनोमी कसरी पकाउने भनेर सिकेकी छिन्। साथै, बोलोग्नेस सस, करी भात र मीट सॉसको साथ पास्ता।
ओड्सन्ने एडुअर्डका भाई बहिनीहरूको बारेमा:
ओन्जे-मन्डियालसँग फुटबलरको अन्तर्वार्तामा हामी बुझ्छौं कि उहाँसँग एक ठूलो बहिनी छ जसले एक पटक खाना पकाउन सिकाउन onण दिने प्रस्ताव राख्नुभयो। के तपाईंलाई थाहा थियो?… ओड्स्न एडुअर्डकी बहिनी एक पेशेवर शेफ हुन् जसले २०१ of सम्ममा एउटा रेस्टुरेन्टमा काम गर्छिन् जसले राम्रो खाना पकाउँछिन्। आफ्नो शुरुआती क्यारियर चरणमा स्ट्राइकर एक पटक आफ्नो अपार्टमेन्टमा जानु भन्दा पहिले उनकी जेठी बहिनीसँग बस्थे।
ओडसन एडुअर्ड अनटोल्ड तथ्यहरू:
हाम्रो बाल्यकाल कहानी र जीवनी लेखनको अन्तिम भागमा, हामी तपाईंलाई जानकारी दिन्छौं जुन तपाईंलाई फ्रान्सेली फुटबलको अगाडि कहिल्यै थाहा छैन। थप विज्ञापन बिना, सुरु गरौं।
तथ्य # १- उहाँ एक पटक एक बटुवालाई शूटिंगको लागि गिरफ्तार गर्नुभयो:
यो घटना उसको किशोरावस्थामा र टुलूससँग loanण लिने क्रममा भयो। ओड्सने (उमेर १ 19) लाई अज्ञात व्यक्तिको टाउकोमा कसैले 'एयरसफ्ट' गोली चलाउनु भन्दा ठीक केही क्षण अघि उसको कारमा CCTV मा समातियो।
उनको पक्राउ पछि पुलिस हिरासतमा हुँदा, किशोरीले उक्त आरोपलाई अस्वीकार गर्‍यो, किनभने उसले त्यस दिनको लागि आफ्नो साथीलाई आफ्नो कार उधार लिएको थियो। दुःखको कुरा, उनले चार महिनाको निलम्बन जेल, एक €,००० डलर जरिवाना पाए र € २6,000०० क्षतिमा तिर्न आदेश दिए। सजाय त्यहाँ समाप्त भएन; उनले weapons बर्ष हतियार बोक्न प्रतिबन्ध लगाए।
तथ्य # १- तलब ब्रेकडाउन र औसत नागरिकसँग तुलना:
प्रति वर्ष € 2,083,200 $ 1,806,983 £ 1,463,808
प्रति महिना € 173,600 $ 150,582 £ 121,984
प्रति हप्ता € 40,000 $ 34,696 £ 35,564
प्रति दिन € 5,714 $ 4,957 £ 5,081
प्रति घण्टा € 238 $ 207 £ 212
प्रति मिनेट €4$ 3.4 3.5
प्रति सेकेन्ड € 0.06 $ 0.06 0.06
ओड्सन्ने एडुअर्ड यही हो कमाई गरिएको छ किनकि तपाईं यो पृष्ठ हेर्न शुरू गर्नुभयो।
माथिको ब्रेकडाउनबाट हेरेर यो कुरा जान्न तपाईं छक्क पर्नुहुनेछ कि औसत स्कटिश नागरिकले एक महिनामा 2,613 २ .XNUMX कमाउने ओड्सने एडुअर्डको मासिक सेल्टिक तलब कमाउन five वर्ष सात महिना काम गर्नुपर्नेछ।
तथ्य # १- प्रशंसकहरु उनको फिफा तथ्या about्कहरु को बारे मा के भन्छन्:
केही प्रशंसकहरूले ओडसन एडुअर्डको फ्रान्सेली लीग २ बराबरको लिगमा खेलाडीको आलोचना गरेका छन्। कोही भन्छन् कि उनले ओभरटेन गरेका छन् भने अरूले चाहिं आर्सेनल जस्ता शीर्ष टिमले उहाँमा जोखिम लिन चाहन्छ।
यद्यपि उसको फिफा तथ्या .्कको अवलोकनले गुयना-जन्माउने आक्रमणकारीले त्यो खराब गरिरहेको छैन भनेर देखाउँदछ। ओडसनसँग सँध फ्रान्सेली खेलाडीसँग मिल्दो फिफाको गुणस्तर छ, मार्कस थुरम.
फिफा तथ्या .्कले उनी भविष्यमा बम हुने प्रमाणित गर्छन्
द्रुत तथ्यहरू पाउनको लागि, हामीले टेबुल तयार गरेका छौं जुन ओड्सन्ने एडुअर्डको जीवनीको सारांश दिन्छ।
पुरा नाम: ओड्सोन ओडार्ड
जन्मे: १ January जनवरी १ 16 1998 K कोरुउ, फ्रेन्च गुयानामा।
अभिभावक: दुबै आमा र बुबा हाईटियन पारिवारिक वंशका हुन्।
सिबलिंग: उनको एक बहिनी छ जो कुक हो।
उचाइ: १.1.87 मिटर वा feet फिट २ इन्च।
शिक्षा: माध्यमिक विद्यालय सम्म अध्ययन। कउडले फुटबलको कारण उसको बाक एसटीएमजी प्रतिस्पर्धा गरेन।
प्रेरणा को स्रोत: क्रिस्टियानो रोनाल्डो
शौक: सुत्ने र टिभी श्रृंखला हेर्दै
कुल मूल्य: M illion मिलियन (२०२० तथ्या )्क)
क्यारियर गोल: युरोप मा सबै भन्दा राम्रो आक्रमणकर्ता बन्ने।
ओड्स्न एडुअर्डको जीवनीमा यस लामो पत्र पढ्नको लागि गरिएको समय र प्रयासको हामी कदर गर्छौं। हामी विश्वास गर्छौं कि ऊ ओभररेट गरिएको छैन र ऊ मध्ये एक हुने सम्भावना छ यूरोपेन फुटबलमा सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइकरहरू.
कृपया हामीलाई टिप्पणी अनुभागमा हाम्रो लेखनको बारेमा के सोच्नुहुन्छ हामीलाई बताउनुहोस्। फूटबलरको बारेमा पनि, उदाहरणका लागि, उहाँ सम्भवतः त्यो उत्तम हुन सक्नुहुन्छ ओलिभर गिरोद फ्रान्सेली राष्ट्रिय टीम को लागी प्रतिस्थापन?
Bafetimbi Gomis बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
अलेक्जेन्डर लेकाजेट बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ बाल्यकाल तथ्य